Vaovao - Ahoana ny fisafidianana kitapo fako
Miaraka amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana dia mitombo ihany koa ny habetsahana sy ny karazana fako ao an-tokantrano, manomboka amin'ny taratasy fidiovana ka hatramin'ny sakafo sisa.
Kitapo fakodia iray amin'ireo zavatra tena ilaina ao amin'ny fianakaviana tsirairay, ary ny mahantra kalitaon'ny harona fako ao amin'ny taratasy fidiovana tsotra sy ny voankazo hodi-kazo, fa indray mandeha miatrika ny sisa sy ny zavatra sasany amin'ny lasopy sy ny rano dia ho tezitra be.
Misy karazany maro ny harona fako eny an-tsena, koa ahoana no tokony hifidianantsika azy ireo amin'ny andro fiasana?Ahoana àry no ahafantaranao ny maha samy hafa ny kitapo fako sy ny ratsy?
Voalohany indrindra, ny harona fako ambany amin'ny ankapobeny dia mampiasa plastika recycled na entam-barotra azo ampiasaina.Ity karazanakitapo fakoNy tenany dia manana fofona plastika mavesatra sy formaldehyde ary zavatra manimba hafa, ary maro amin'ireo kitapo fako ambany ireo no misy poti na teboka miparitaka amin'ny harona plastika, izay tena mora avahana.Ny kitapo fako avo lenta dia mangarahara tanteraka ary tsy vaky.
Amin'izao fotoana izao dia kalitao tena tsarakitapo fako, Voalohany indrindra amin'ny fitaovana, ny fampiasana ny fitaovana vaovao PE, azo antoka sy salama, tsy misy fofona, ary ampitomboina amin'ny vata fampangatsiahana ara-teknolojia maharitra maharitra, mitondra hery matanjaka, tsy mora simba.
Faharoa, ho an'ny fahaiza-manaon'ny rano, betsaka ny zavatra ao amin'ny fako ao an-trano dia lasopy sy rano.Raha mora mitete ny kitapo fako dia tsy maharikoriko fotsiny rehefa ariana, fa sarotra be ny maka.
Ity karazana harona fako ity dia mampiasa ny dingan'ny fitsofana horonan-tsarimihetsika, manana fahaiza-manao mahatohitra puncture tena tsara, na dia mitazona durian 20 kilao aza dia tsy ho simba.
Amin'izay fotoana izay ihany koa dia tena henjana izy io, na dia tsy ho mora tapaka aza ny tebiteby.
Tapa-teboka karazana fanitarana fanokafana, mba hamaha ny mora hamiravira ny henatra.